NS Malagasy Archive | NewsMada | Page 3
Par Taratra sur 25/09/2020 Faits Divers, NS Malagasy
Natsingevan’ny ranomasina ny fatin’ilay tovolahy rendrika tsy hita tao amin’ny village touristique, afakomaly. Nisy, araka izany, ny joro ho fanajana ny fomban-tany nataon’ny fianakaviana ka taorian’izay dia nivoaka ny razana, araka ny fanazavan’ireo olona akaiky azy. Voalaza fa nilomano teo amin’ny ranomasina izy ka tsy hita popoka nony avy eo. Taorian’ny fanajana ny fombafomba rehetra, […]
Antsirabe: polisy vehivavy roa nahasambotra jiolahy nanafika cash point
Mampahatsiahy ny horonantsarimihetsika iray izay ny fahitana ireto polisy vehivavy roa nahasambotra jiolahy iray avy nanafika cash point iray ao Antsirabe, omaly. Polisy vehivavy avy ao amin’ny brigade feminine de proximité ao Antsirabe izy ireo. Nisy fanafihana cash point nataona jiolahy iray tao Ampihaviana Antsirabe, tamin’io fotoana io. Afaka niantso vonjy nanaitra ireo polisy vehivavy […]
Antanambao – Maintirano: tratra ireo jiolahy nanafika sy nanolana mpianaka
Noraisim-potsiny ireo jiolahy mpanao fanafihana sady nanolana mpianaka nandritra ny fanafihana tao Tanambao Maintirano… Voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny DRSP Melaky, ny herinandro teo ireo jiolahy voarohirohy ho isan’ny tompon’antoka tamin’ny famakian-trano sy fihazonana olona an-keriny miharo fanolanana. Raha ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy, tokantrano iray ao amin’ny fokontany Tanambao kaominina ambanivohitr’i Maintirano no […]
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Fandriampahalemana, antoka voalohany ho amin’ny fampandrosoana
Par Les Nouvelles sur 25/09/2020 Elucubrations, NS Malagasy
Toy ny kabarin’ny mpihira gasy izay, isak’izay mandeha izao, izay hevitra velabelarina no lazaina ho zava-dehibe indrindra. Dia marina izany, fa marina koa ny an’ireny mpikabary ireny amin’io fotoana iresahany io. Ilay loha-hevitra noraisiny no mifantoka mibahan-toerana ao an-tsainy ary raha hisintona ny sain’ny olona ifampizarany hevitra izy dia tsy maintsy asongadiny ilay anton-dresaka. Rehefa […]
Saison des pluies: la CUA se prépare
Par Les Nouvelles sur 25/09/2020 NS Français, NS Malagasy
La saison des pluies est annoncée comme particulièrement rude cette année, par rapport à l’an passé, selon la météo et les résultats du test «International Weather, Africa, Madagascar». Pour y faire face, la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA) et la Sadc se sont réunies la semaine dernière. D’après le directeur de gestion de risques et catastrophes […]
Par Taratra sur 24/09/2020 Economie, NS Malagasy
Tetikasa iray manohana ny tontolo any ambanivohira amina sehatra asa maro ny Prosperer (Programme de soutien aux pôles de micro-entreprises rurrales et aux aux économies régionales). Tanjona amin’izany ny hampitombo ny fidiram-bolan’ny tantsaha mahantra any ambanivohitra hifantoka bebe kokoa amin’ny fambolena sy ny fanaovana asa tanana. Faritra dimy no tena ahitana izany sy distrika 19, […]
Mitohy ny lalana, ary miakatra hatrany ny laharan’ny ekipam-pirenena malagasy Robotika. Efa maro ireo fanamby notakina amin’izy ireo, ary tontosany soa aman-tsara avokoa nandritra izay fotoana lavalava nisian’ny fifaninanana “First Global Challenge 2020” izay. Hiatrika ny fanamby faha-25 sady farany ireto tanora manampahaizana ireto, ka naka aingam-panahy tamin’ny fitsidihana ozinina. Nandray azy ireo ny ekipan’ny […]
Matetika ny faritra Vakinankaratra ihany no fantatry ny maro momba ny famokarana ronono eto Madagasikara. Manana ny anjara toerany lehibe amin’izany sehatra izany koa ny faritra Matsiatra Ambony. Mandrafitra ny atao hoe Telozoron’ny ronono i Matsiatra Ambony, na faritra manana toe-tany sy toetr’andro mety tsara amin’ny fiompiana ombivavy beronono. Tafiditra indrindra anatin’ireo laharam-pahamehan’ny faritra ny […]
Par Taratra sur 24/09/2020 Divers, NS Malagasy
Basikety-NBA: Hamaritra izay ho tafakatra amin’ny famaranana lehibe, ho an’ny kaonferansa ilany, ny lalao fahefatra hifanandrinan’ny Lakers sy ny Nuggets. Tsiahivina fa fandresena roa ny efa azon’ny Lakers tamin’ny fifandonan’ny roa tonta, raha toa ka azon’ny Nuggets kosa ny lalao fahatelo, omaly. Isa 116 ny nandavoan’ny ekipan’i Jamal Murray an-dry James Lebron, tamin’ity lalao omaly […]
Par Taratra sur 24/09/2020 NS Malagasy, NS-Sports
Hotanterahina amin’ity alakamisy 24 septambra ity, ao amin’ny kianja Puskas Arena, Budapest, ao Hongrie, ny fiadiana ny «Super coupe de l’UEFA», taranja baolina kitra. Hifandona amin’izany ny Bayern de Munich, tompondakan’i Eoropa, sy ny FC Seville, tompon’ny amboara. Heverin’ny rehetra fa hangotraka ny fihaonana na betsaka aza ireo mihevitra fa mety tsy hahatohitra an-dry Rainiboto […]
Mitohy anio ny fifaninanana, hiadiana ny “Roland Garros”, taranja tenisy, ho an’Andrianjafitrimo Tessah. Hiditra eo amin’ny fihodinana faharoa izy ka hidona amin’ily teratany sinoa, i Xinyu Wang, amin’izany. Ambony ny filaharan’ity mpifanandrina aminy ity satria faha-145 maneran-tany. Vao 18 taona monja ity Sinoa ity ary indroa nandray anjara tamin’ny “Crand chelem” dia ny “Australian open”, […]
Ho fiomanana amin’ny BAL (Basket afro league) sy ny “Afrobasket 2021”, nanapaka ny federasiona fa hatambatra ny fanazarantena ho an’ny ekipam-pirenena sy ny klioban’ny GNBC. Io ny isan’ny nivoitra nandritra ny fivorian’ny komity mpanatanteraka eo anivon’ny federasiona ny talata lasa teo tetsy amin’ny ANS Ampefiloha. Mbola hojerena ny fomba hanatanterahana izany satria efa niverina nanao […]
Izay vao tena fantatra fa misy ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF) sy i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar. Ankoatra izay, tsy manantena vokatra loatra amin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire ny tenany. Novakin’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar, ampahibemaso tao amin’ny tambanjotran-tserasera fa misy ny tsy fifankahazoana eo […]
Par Taratra sur 24/09/2020 NS Malagasy, NS-Culture
Araka ny nampanantenain’i Mario, efa nivoaka niparitaka ao amin’ny tambajotran-tserasera « facebook » sy ny «youtube», ny alahady teo, ny hira vaovao an’i Romeo 3.0 «Jaolahy be», amin’ny gadona balvin & wizkid. Mbola tena vitsy mpanao eto Madagasikara kanefa manana ny hanitra ho azy izy io, araka ny nambarany. Anisan’ny tena nahafantarana an’i Romeo 3.0 ny afrobeat […]
Tsy ny hira irery intsony fa hatramin’ny boky, anjakan’ny mpanao piraty! “Raha izaho manokana, tsy mankasitraka ity nomerika ity aho. Jereo tsara fa mitondra faisana mihitsy ny tontolon’ny boky manoloana ny PDF ataon’ny sasany. Boky amidy 10 000 Ar, amidin’ny mpanao piraty any anaty “facebook” 500 Ar”, hoy ity filohan’ny Federasion’ny mpikanto teny sy soratra ity. […]
Sokitra, paibato, paikafo, hosodoko… Mbola tena vitsy dia vitsy ny mivelona amin’ny fantanterahana asa tanana tahaka ireny, raha eto Madagasikara. Antony iray mahatonga izany ny tsy fananan’ny Malagasy ilay kolontsaina manome lanja azy io. “Matetika izahay mahare hoe: “io ve dia vidiako amin’izany?”, hoy i Martin R. mpanao paibato, eny Andriambato Antananarivo Atsimondrano. Nambarany fa […]
… Satria voizina mafy any ivelany ny fandikan-teny, roboka ihany koa ny Malagasy. Raisina ho zava-dehibe ny momba azy io hany ka maro ny petatoko ao anatiny. Mety hitarika any amin-javatra hafa mihitsy anefa izay… Efa tsy finiavana hampivelatra ny teny malagasy irery intsony kosa ny manosika ny mpikaroka sasany fa fahamaizana ny haka tahaka […]
“Noho ny faharefoan’ny ankizy raisina an-tanana ao amin’ny akany, nisintaka mihitsy tany ambanivohitra ny zaza sy ny mpikarakara nandritra ny fihibohana hisorohana ny fahazoan’izy ireo ny tsimokaretina”, hoy ny mpitantana ny akany fandraisana. Nikatona tanteraka ny akany eny Mahamasina. Antso amin’ny finday fizarana vaovao sy fandefasana vola amin’ny finday ny tantsoroka natao ireo ray aman-dreny […]
Ny fehezam-pitsipika momba ny fikoloam-pahasalamana navoaka’ny CUA ao amin’ny toko fahatelo sokajy voalohany dia milaza fa tsy tokony hanelingelina ny mpamily fiarakodia sy ny mpandeha an-tongotra ireo rehetra manao ny asa fangatahana izay mandehandeha eny an’araben’Antananarivo. Izy ireo dia tsy tokony harahina biby masiaka mba tsy hampidi-doza ny hafa. Tsy tokony hampideradera fitaovana isan-karazany […]
Nanomboka tamin’ity herinandro ity, efa am-perinasa ny « guichet unique interministeriel» ho an’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Miasa eo anivon’ny sampandraharaha miasahana ny fitantanana ny mpiasa, etsy Mahamasina izy io. Fomba entina hikarakarana haingana ny antontan-taratasin’ny mpiasa izany. Ho an’ireo mpiasa alefa hisotro ronono, efa miisa 1.400 ireo antontan-taratasy momba izany. Ireo hafindra toerana kosa mahatratra 1.300. Ho an’ireo […]
Par Taratra sur 24/09/2020 Faits Divers, NS Malagasy
Natao, omaly tetsy Tsaralalana, trano fiasan’ny Madagascar Entreprise Développement (MED), ny fanolorana ny tohana ara-bola ho an’ireo mpandraharaha madinika 100 voafantina tamin’ny tetikasa “Atrika” nokarakarain’ny vondrona MED. 50 000 000 Ar izany tohana izany izay natao indrindra hanohanana ireo mpandraharaha madinika mpikambana ao amin’ny MED, noho ny fahavoazana vokatry ny valanaretina Covid-19. Efa nahazo fiofanana tao amin’ny […]
Mbola ny malala-tanana sy mpiray ombona antoka malagasy sy vahiny no mampihodina ny Akany Sainte Marie, amin’ny fandraisana an-tanana ireo ankizy tandindonin-doza. Efa-taona amin’ity taona ity ny nitondra fanampiana ho an’ny Akany Sainte Marie eny Mahamasina ny Office pharmaceutique malgache (Opham) sy ny fivondronan’ny toeram-pivarotana lehibe S2M ahitana ny Jumbo Score, ny Score ary ny […]
Nanatitra ny taratasy fanendrena azy hiasa sy honina eto Madagasikara amin’ny filoha Rajoelina Andry, omaly teny Iavoloha, ny masoivoho vaovao an’i Ejypta, i Usama Saeed Khalil. Voaresaka tamin’izany ny momba ireo endrika fiaraha-miasa azo tanterahina eo amin’ny firenena roa tonta. Anisany ny fananganana fotodrafitrasa sy ny angovo azo avy amin’ny herin’ny masoandro. Nihaona manokana tamin’ny […]
Par Taratra sur 24/09/2020 NS Malagasy, NS-Politique
Hanenjana hatramin’ny farany. Tonga teny amin’ny foiben’ny Ceni, Alarobia, koa, omaly, ireo eo anivon’ny “Groupe Panorama”, ahitana ireo antoko ivelan’ny fitondrana sy ny parlemantera. “Hamafisinay hatrany ny fanapahan-kevitra noraisina teny Andrainarivo fa tsy ankatoavinay ny fomba fiasan’ny Ceni. Tsy hanatrika ny fivoriana tarihin’izy ireo izahay fa hanatitra taratasy omena ireo mpiara-miombona antoka teknika sy vola […]
“Miainga avy amin’ireo tolo-kevitry ny mpiara-miombona antoka, ny antoko politika sy ny kandidà tamin’ny fifidianana, ny mpanara-maso ny fifidianana… Naravon’ny Ceni izany ary hatolotra amin’ireo rafitra mahefa amin’ny fampanjariana ny lalàna” , hoy ny mpampaka-tenin’ny Ceni, Rakotondrazaka Fano, teny Alarobia, omaly. Namory ireo mpiara-miombona antoka teknika sy vola (PTF) sy ny antoko politika ny eo […]
« Précédent 1 2 3 4 5 … 1 498 Suivant »